Lohahevitra “ MIHAVAO HATRANY NY MARINA”
Fiarahabana Apostolika : II Kor 13 : 14
Salamo 106 : 1-5
Hira 16 : 1, 2 , 3
Sitrapon’Andriamanitra : Efes 5 : 18 + I Kor 3 : 16- 17, Sambatra ny mahitsy lalana.....
Hira Vokovoko Manga 38 : 1 , 5
Hira : 408 : 1,2
Famelan-keloka : Jao 3 : 17 + Jao 8 : 36, Sambatra ny olona izay voavela ny helony….
Hira 487 : 1, 2
5 mn ho an’ny Sekoly Alahady
Rakitra ( fanolorana ny Rakitra )
Hira Fanampiny 6 : 1, 2
Soratra Masina : vavaka
T.T : Isa 61 : 4 -9
T.V : Lio 21 : 34- 36
Epist : Apok 21 : 1-5
Feon-javamaneno, hiran’ny SVM na Chorale…
Vavaka Fangatahana + Rainay Izay any an-danitra …
Hira : 512 : 1
Hira : “ Mandrosoa ry Vokovoko Manga”
Mipetraka mivavaka mangina
Trinite Masina .............................................................................................................................
Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompontsika.
« Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko …Koa avia ankehitriny ianao hirahiko.Homba anao tokoa Aho » ( Eks3 :7b ;10a ;12b)
Izany teny fanevan’ny Zaikabe faha XIV,izay foto-kevitra mibaiko ny asantsika Sampana Vokovoko Manga mandritra ny efatra (4) Taona izany indray no iarahabana antsika mpikatroka rehetra manerana ny Nosy mahatratra izao ALAHADY MANGA izao. Tsy loza mitatao intsony, fa efa loza mihatra mihitsy ny ateraky ny zava-mahadomelina eto amin’ity firenentsika ity :
Mihena hatrany ny salan-taonan’ireo mandray zava-mahadomelina , fa any amin’ny Sekoly Ambaratonga voalohany dia efa maro no manendry izany.
Tsy takona afenina ny fahorian’ny tokantrano maro akorontan’ny ray aman-dreny voafatotry ny zava-mahadomelina.
Iaraha –mahita sy mahalala ny fitomboan’ireo mivarilavo amin’ny zava-mahadomelina manoloana ny fahasarotam-piainana sy ny krizy tsy misy farany eto amin’ny firenena.
Tsy azo lavina ny fihenan’ny hery mpamokatra sy ny firongatry ny aretina ateraky ny zava-mahadomelina.
Mila mijoro isika ho fakan-tahaka ho an’ny olona rehetra amin’ny finoana , mila sahy isika ho mpikatroka mahafatra-po hiady amin’izao fihanaky ny zava-mahadomelina izao, mila manapa-kevitra haingana isika hiaro ireo taranaka manoloana izao fidorohana zava-mahadomelina mirongatra izao. Ho amin’izany rahateo ny hafatra ampitain’ny Zaikabe faha XIV handrafetan’ny isam-Pitandremana sy ny isan-tSynodamparitany ny tetikasany amin’izany ady tsaran’ny finoana ikatrohantsika izao.
Koa, misaotra an’Andriamanitra isika fa noho ny fitantanany no nahatanteraka ny Fihaonambe sy ny Zaikabe faha XIV tany Mahajanga ny 09-14 Aogositra 2011, nifidianana ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny dia ny Birao Sampana Vokovoko Manga , ny Komity Foibe Sampana Vokovoko Manga ary ny Tonia.
Koa manentana antsika rehetra hifanohana amim-bavaka ireo tompon’andraikitra voafidy ireo sy ny asan’ny Sampana Vokovoko Manga iaraha-manatanteraka ary hanolotra ny Rakitra amin’ity Alahady manga 2012 ity ho fanehoana ny fiombonantsika amin’izao asan’ny Sampana Vokovoko Manga FJKM izao.
Eto izahay dia manolotra ny fisaorana feno fankasitrahana ho anareo Fiangonana izay nitrotro tamim-bavaka sy nanolotra Rakitra ary ianareo Synodamparitany nahatanteraka ny Adidy ho fiaraha- mientantsika amin’ny asa iombonana tamin’iny Taona 2011 iny. Ialana tsiny raha misy tsy voasoratra. Raha sanatria misy izany dia iangaviana am-panetrentena hanatona ny Foibe Sampana Vokovoko Manga FJKM Varavarana 506 miaraka amin’ny fanamarinana.
Tsarovy sy ekeo fa « Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany » (Heb6 : 10)
Indro ny FANDAHARAM-POTOANA IOMBONANA TAONA 2012 miaraka amin’ny anaran’ireo Fiangonana nandrotsaka ny Rakitra ALahady Manga hatramin’ny 31 Martsa 2012.
Dia mirary soa antsika rehetra mpikatroka manerana ny Nosy ho mpandresy ary hanoatra noho ny mpandresy amin’ny alalan’Ilay tia antsika , dia Jesoa Kristy Andriamanitra Mahery.
« Miadia ny ady tsaran’ny finoana , hazony ny fiainana mandrakizay ; fa ho amin’izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanekena tsara teo imason’ny vavolombelona maro » (I Tim 6 :12)
RANAIVOARISOA Tiarison Mpitandrina
RAKOTOMANANA H Tahiry Mpitandrina
Indro ary atolotra antsika izay hafatra sy tsara ho fantatra tany amin’ny Zaikabe
1- Ny Sampana Vokovoko Manga dia miady sady mifady tanteraka ny zava-mahadomelina (abstinence totale) . Mitory ny Filazantsaran’i Kristy kosa ho fanafahana ireo izay mbola voageja sy fatoran’izany zava-mahadomelina izany, satria hoy ny Soratra Masina hoe « Raha ny Zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa hianareo » Jao 8 : 36. Amin’ny fomba maro isan-karazany sy amin’ny endrika samihafa no hanatanterahan’ny Sampana izany asa fanafahana hanampiana ireo voageja sy ady amin’ny zava-mahadomelina izany.
2- Tokony ho fantantsika koa fa manomboka izao dia ezahina hiparitaka manerana ny Synodam-paritany rehetra misy Sampana Vokovoko Manga ny fampiofanana ireo Mpiandraikitra ao amin’ny Rantsana efatra ao anatin’ny SVM ary efa misy boky tari-dalana manokana ho amin’izany fampiofanana Mpiandraikitra isan-tsynodam-paritany izany. Ezahintsika ihany koa ny hampiasa zava-masina sy voatokana amin’ny asan’Andriamanitra . Koa efa misy sy miparitaka izao ny « divay manokana natao ho divaim-pandraisana » , ary entanina isika mba hampiasa izany. Raha mila fanazavana mahakasika ireo isika dia iangaviana hanatona ny Komity Foibe ato amin’ny SP misy antsika na ny Prezidà Synodaly.
3- Ireto avy ary ireo Birao vaovao voafidy indray tany amin’ny Zaikabe tany Mahajanga tamin’ny volana Aogositra 2011 lasa teo :
Filoha Mpanampy : RANAIVOARISOA Tiarison, Mpitandrina
Filoha Mpanampy Laika : RANDRIAMAMONJISOA Georges Henri
Mpitantsoratry ny raharaha : RAKOTOVOLOLONA Elanirina Faly Vahiny, Mpitandrina
Mpitantsoratry ny vola : RANAIVOARISON Célestin
Mpitahiry Vola : ANDRIANARIMISA Voahangy Mpanolotsaina : RAKOTONDRABE Martin, Mpitandrina
Tonia : RAKOTOMANANA Herintsoa Tahiry, Mpitandrina.
Mpandraharaha : RAKOTOSON Aina Lovasoanirainy
IRETO NO MILAZA NY VOKADRATSIN’NY ZAVA-MAHADOMELINA Toaka sy Divay :
Gen 9 : 20-23 , Gen 19:31-36
Oha 20:1 , Oha 23:29-35
Isa 5:11-12 , Isa 5:22
Hab 2:15-16 , Efe 5 : 18
Sigara sy paraky Joba 41:11-12 , Joba 20 : 12-16
VOKATSOA AZO AMIN’NY FIFADIANA Lev 10 : 9-10,Nom 6 : 1-8 , Mpits 13:3-5 , Jer 35
Oha 31 : 4-5 , Oha 31:13
Fanampiny Jer 25 :27 , I Kor 6 : 10 , Gal 5:21